မွေးရပ်မြေ အညာ: အညာမြေမှ ယက်ကန်းခတ်သံ
Posted by ကိုမျိုး (အညာမြေ) at 3:11 AM
ပြန်လာပြီပေါ့နော် ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ လက်ဆောင် တွေ လည်း ပေးအုန်းလေ စာကောင်း လေးတွေမျှော်နေတယ်
လင့်ခ် လေးလည်း ယူသွားပါတယ်
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ ကြာရင်မေ့သွားမှာပါ
နေပူပူမှာ ချည်ထည်လေးဝတ်ပြီးလျှောက်လည် လိုက်အုံးမယ်
ကိုမျိုးရယ်..ကိုကြီးကျောက်လဲ ရွာတွေရောက်ရင် ယက္ကန်းဝင်ခတ်ကြည့်တာပဲ၊ ဖျင်ကြမ်းတဘက်လေးတွေတော့ ဝင်ခတ်လိုက်တာပဲ
ပုဆိုးတော့မခတ်တတ်ဘူး၊ ရိုးရာယက္ကန်းစင်က ရှားသွားပြီ၊ စက်ယက္က္ကန်းတွေပဲ ကျန်တော့တယ်၊ နွားစာစဉ်းခုံလေးပါ ရိုက်ပြထားသေး၊ ရန်ကုန်က အဲဒါ မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေသိအောင် အသံနဲ့ ရှင်းပြထားလေ၊ ကိုကြီးကျောက်တို့ အညာသားတွေကတော့ မြင်နေကြဆိုတော့ ဘာတွေဆိုတာသိပေမဲ့ ထောက်ကြံ့ထက်ဝေးတဲ့နေရာတောင်မရောက်ဖူးတဲ့ ရန်ကုန်သူစစ်စစ်တွေက သိကြမှာမဟုတ်ဘူး
Thanks you for your video and post. It reminds me of my childhood days. I'm glad you've made it to the way back home and welcome back to robotic life. :) Those traditional "yat kan" jargons are very familiar with me as i was grown up around looms. But now, I can't name exactly what they are called and how they are used to producealongyi orablanket. Though there are many longyi industries nowadays, i still love to wear hand-made (or even home-made!) longyi proudly. However, the market is already ruined as china already colonised our traditions with their cheap and crappy products.
As you mentioned, it takesalot of time to craft cotton intoabeautiful longyi & blanket. So many workers prefer to followaquicker way to make living for them; farming. Gradually, traditional yat kan and other traditions such as wooden crafts are disappearing from the market. We should put those traditions into endanger list just like trying to protect rare animal species for the sake of Burmese traditions.
I want to see Ghandi's video that he tried to encourage people to use home-made products instead of imported goods again. Oh your post truly inspires me. Thanks again. Cheers!
အညာကပြန်လာပြီး ဘယ်လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။
“ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀တွေပဲလေ။”
ပို့စ်ကတော့ သိပ်ကို မြန်မာဆန်ပြီး အလွမ်းပြေရပါတယ်။
ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီလို အစကအဆုံး လက်နဲ့လုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေက သိပ်ကို ဈေးသက်သာတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာဆိုရင် အလွန်ကိုဈေးကြီးတယ်။
နောက်တစ်ခုက အဲဒီလိုရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမိရိုးဖလာလုပ်ငန်းတွေကို ဒီကတိုင်းပြည်တွေမှာ တန်ဘိုးထားတယ်။ နိုင်ငံတော်ကလည်းထောက်ပံ့တယ်။
ပြီးတော့မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းတွေကို လူငယ်တွေပညာတတ်တွေကဆက်ခံပြီး ခေတ်နဲ့ ညီအောင်တီထွင်မှုကိုပေါင်းစပ်တယ်။
နောက်ဆုံးပိုဒ်က “မန်မာ့ချည်ထည်လေးတွေကို တန်ဘိုးထားတယ်။ မြတ်နိုးတယ်။ မြန်မာ့ကျေးလက် အနုပညာကို လေးစားတယ်။ ဂုဏ်ယူတယ်။ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့ ဆိုချင်ဆို။ ကျုပ်ကတော့ ကျေးလက်အမွေအနှစ်မို့ နောက်တစ်ခေါက် ရွာပြန်ရင် ယက်ကန်းခတ်သံလေးတွေ မကြားရတော့မှာ နှမြောမိသဗျာ။” ဆိုတာကိုဖတ်ရတာ တကယ်ကို ထပ်တူထပ်မျှခံစားရပါတယ်။
ဗေဒါမ (ရဲရဲတောက်) said...
လာပြန်ဖတ်ရသေးတယ်.. အစချီတုံးက ကျွန်တော်ဘာညာဆိုပြီး ဟုတ်နေပါရက်နဲ့ အောက်ပိုဒ်လည်းရောက်ရော ဘာဖြစ်လို့ ` ကျုပ် `လို့ ဖြစ်သွားရတာသတုံးအေ.. အဲလောက် တန်ရှင်တွေ မြင့်သွားတော့ ဖတ်ရတာ .. မျိုးချစ်စိတ် တွေ ဖြန်းဖြန်းထသွားလေရဲ့..။
အော် ပျော်ရာကို စွန့်ခွာခဲ့ရသတဲ့လား ကိုမျိုးရေ.. နုလုံးနုတဲ့ ဗေဒါမ ရေးရင်း မျက်ရည်ဝဲတယ်.. ဘယ်တော့မှ ပျော်တဲ့နေရာကို ပြန်ရမလဲလို့ပါ.. အနှစ် ၂၀ နည်းပါးပဲ..။ တကယ်ပါ လွမ်းလွန်းတယ် မောင်မျိုးရေ.. မွေးရပ်မြေဆိုတာ အကြောင်းပေါင်း မလှလို့ ဘယ်လောက်ပဲအကျည်းတန်နေပါစေ မဗေဒါအတွက် ချစ်စရာတွေ အများကြီး ကျန်နေမယ်လို့ အမြဲယုံကြည်နေတယ်.. ကိုယ့်လူမျိုး.. ကိုယ့်စကား အစရှိတဲ့အရပ်ဟာ မဗေဒါအတွက် ပျော်စရာဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ..။
ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေး ထည့်ရေးတာကောင်းတယ်.. ပိုသဘောပေါက်သွားတယ်.. စာပေဆိုတာ တနေရာတည်း မရပ်နေတော့ အကြောင်းအရာလိုက် ခိုင်းနှိုင်းသုံးတာတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်.. စာပေတန်ခိုး တွင်ကျယ်မှုပေါ့နော်..။
အညာပြန်ပြီး ကုန်ကြမ်းတွေ ရှာခဲ့တဲ့ မောင်မျိုးရေ စာတွေ ဖတ်ဖို့ အားမွေးထားမယ်..။ မိသားစုတွေ ပျော်ရွင်ပါစေလို့..။
ကိုမျိုးရေ တော်တော်ပျော်ခဲ့တယ်ထင်တယ်နော်။ ဘယ်လိုနေမယ် ဆိုတာကိုယ် ချင်းစာပါတယ် ယက်ကန်းအကြောင်းက ကိုယ်လည်းအညာသူဆိုပေမဲ့ အခုလိုအသေးစိပ်သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ စိတ်အဝင်စားဆုံးကတော့ အညာလက်ဆောင်တွေတော့ တပွေ့တပိုက်ကြီးနဲ့ပါ ဆိုတာပဲ ဟဲဟဲ
Visited and notedanew chapter in life brother. Expect to read serial travel articles.
မိသားစု စားဝတ်နေရေးကြောင့် ပိုအဆင်ပြေမယ့် အလုပ်တွေ ကူးပြောင်းရင်းနဲ့
ရိုးရာ လက်မှုတွေ တိမ်ကောသွားမှာကို တကယ် နှမျောတယ်ဗျာ။ ဒါတွေကမှ မြန်မာ ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ပြနိင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့